Etu esi emezi ihe zip faịlụ? - DataNumen
Data dị n'ime ya na akụkụ ya Zip faịlụ ndị yiri ndị nke nkewa Zip faịlụ Nanị ọdịiche dị n'etiti ha bụ aha akụkụ nke faịlụ ahụ, nke ahụ bụ:
Akụkụ ọ bụla nke nkewa Zip faịlị nwere mgbatị dị iche (dịka 'mysplit.z01', 'mysplit.z02', wdg, na 'mysplit.zip'maka akụkụ ikpeazụ). Mgbe akụkụ nile nke a na-adịru Zip faịlụ nwere otu aha (dika 'myspan.zip').
Ya mere, ụzọ iji mezie oge gị Zip faịlụ dị nnọọ ka nke ahụ maka nkewa Zip faịlị (chee na faịlụ faịlụ gị na-adịru 'myspan).zip'), dị ka ndị a:
1. Mepụta ogerary folda na draịvụ ike gị, na-eche na ọ bụ C: \_ TempFolder \_.
2. Detuo myspan.zip na nke mbụ zip disk ka C: \_ TempFolder \_ ma nyegharịa ya myspan.z01
3. Detuo myspan.zip na nke abụọ zip disk ka C: \_ TempFolder \_ ma nyegharịa ya myspan.z02
4. Tinyegharịa nzọụkwụ 3 ruo mgbe myspan.zip na niile zip e depụtaghachiri diski na C: \_ TempFolder \_ ma weghachite aha ha n'usoro. Rịba ama myspan ahụ.zip n'ikpeazu zip diski ekwesighi ka etinye aha ya.
5. Soro ntuziaka na ịrụzi nkewa zip file ịrụkwa ọnụọgụ abụọ Zip faịlụ.
iso, agbatị zip file, Kewaa, zip file